Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » WTTC dia mamaly ny tolo-kevitra farany avy amin'ny EU
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • teknolojia • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
wttc fitetezana azo antoka
Ny minisitra sy ny mpanapa-kevitra iraisam-pirenena ao amin'ny ivon-toerana dia manova ny fameperana ny dia isan'andro. Ny tsy fahampian'ny fiaraha-miasa manerantany sy ny tsy fisian'ny rafitra manerantany dia manao fanamby iraisam-pirenena, eny fa na dia ho an'ireo mpandeha vita vaksiny aza.
Tahaka ny nataon'ny WTTC teo aloha, ny fikambanana misolo tena ny mpikambana lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ankehitriny dia nanao fanambarana sy lisitra firariana.
Raha ity fanambarana ity dia hanampy amin'ny fandraisana andraikitra miandry.
Julia Simpson, filoha & CEO an'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) dia namoaka fanambarana nilaza fa: "Ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka dia tokony ho laharam-pahamehana ary ny WTTC dia manohana mafy ireo protokol fiarovana mba hampitsaharana ny fiparitahan'ny COVID-19.
Na izany aza, ny tolo-kevitry ny vondrona eropeana hamerenana ny famerana ny mpandeha amerikana dia mihemotra ary hampiadana ny famerenana ny sehatra.
“Miakatra ny tahan'ny fanaovam-baksiny avo na US na EU, tokony hijery ny hanokafana ny dia anelanelan'ny toekarena roa lehibe isika.
Nanampy ny CEO WTTC:
Mila fitsipika iraisana iraisan'ny rehetra momba ny vaksinim-pirenena isika ary manala ny filàna quarantine ho an'ireo olona manana valiny COVID ratsy.
“Etazonia dia tsena loharanon-karena lehibe ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny EU, toa an'i Frantsa, Italia, Alemana ary Irlandy, ary ny fizahan-tany dia hitsikera amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana ara-dalàna sy asa an'aliny maro any Etazonia sy EU.
"Raha tokony hametraka ny famerana ny fivezivezena hafa manimba, ny EU dia tokony hampirisika ny firenena mpikambana hampiasa ny taratasy fanamarinana COVID nomerika hamerenana amin'ny laoniny soa aman-tsara ny dia iraisam-pirenena, ifotoran'ny toekarena eropeana."
The Nakatona ny fivahinianana rehetra ilaina ho an'ny mpitsidika amerikana ny vondrona eropeana mandritra ny telo andro noho ny fiakaran'ny aretina COVID-19 vaovao any Etazonia.
Portugal, mpikambana iray ao amin'ny vondrona eropeana androany dia niala tamin'ny fitsipiky ny EU milaza fa mbola handray ireo mpizahatany amerikanina izy ireo.
Misokatra hatrany amin'ireo mpizahatany amerikana i Portugal na eo aza ny torohevitra omen'ny EU
September 2, 2021 ao amin'ny 13: 32
ny teny tsy hita dia "TOLOM-PANOHANA" izay nesorina tamin'ny fanamarihako.
September 2, 2021 ao amin'ny 13: 30
Azafady mba ataovy marina tsara ny lahatsoratranao… .hafoinao ny teny lehibe amin'ity fehezanteny ity - voamarika ao anaty fononteny:
“Nikatona nandritra ny telo andro ny Vondrona Eropeana rehetra amin'ny fitsidihan'ny mpitsidika amerikana noho ny fiakaran'ny aretina COVID-19 vaovao any Etazonia.”
Manao tsinontsinona ianao amin'ny tsy fanaovana tatitra marina.